Simyo သည်မစဉ်းစားထားသော megabytes | စုဆောင်းရန်ခွင့်ပြုလိမ့်မည် Androidsis
Rafa Rodriguez Ballesteros | | တယ်လီဖုန်းအော်ပရေတာ
ကုမ္ပဏီတစ်ခုသည်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်သုံးစွဲသူများအားလူသိရှင်ကြားကောင်းအောင်လုပ်သည့်အခါကြီးလာသည်။ Simyo သည်၎င်း၏ဖောက်သည်များကိုနှစ်ပေါင်းများစွာစိတ်ကျေနပ်စေခဲ့သည်။ ပြီးတော့အဲဒါကိုအခြေခံသည် ကောင်းသောအစပျိုးခြင်းနှင့်အားသာချက်များ သူတို့ရဲ့ယုံကြည်မှုထားရှိသူတွေကိုလျှောက်လွှာတင်ခဲ့တယ်။
ယှဉ်ပြိုင်မှုနှင့်မတူဘဲ Simyo သည်၎င်း၏ကြော်ငြာလှုပ်ရှားမှုများကိုယာယီဖောက်သည်များအားဆွဲဆောင်သောယာယီကမ်းလှမ်းမှုများအပေါ်အခြေမခံပါ။ သူ၌ရှိသောသူတို့ကိုလည်းဂရုစိုက်ရန်သူကြိုက်သည်။ ၎င်းတွင်နေ့စဉ်အခြေခံအားဖြင့်အကြံပြုလိုသောဖောက်သည်အမြောက်အများကိုထိန်းသိမ်းထားရန်စွမ်းရည်ရှိသည်။
သင်မသုံးစွဲသော Megas ကိုနောက်လများတွင်စုဆောင်းပါ
ဒီနေ့မိုဘိုင်းဖုန်းဈေးကွက်မှာဒီလိုမျိုးအရောင်းမြှင့်တင်မှုတွေကိုတွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ်။ တယ်လီဖုန်းနှင့်အင်တာနက်ဆက်သွယ်ရေးကုမ္ပဏီကြီးများသည် ဆက်လက်၍ တိုးတက်ရန်ဆက်လက်ကြိုးစားနေကြသည်။ ရှိပါတယ် မျှတသောစျေးနှုန်းဖြင့်အကောင်းဆုံး ၀ န်ဆောင်မှုပေးခြင်းအပေါ်သူတို့၏အကြောင်းပြချက်ကိုအခြေပြုသောကုမ္ပဏီများ.
ကျနော်တို့စာချုပ်ချုပ်ဆိုထားသောနှောင်ကြိုးတိုးတက်ကောင်းမွန်သောကုမ္ပဏီနှင့်မရင်းနှီးပါ။ သူ့ကိုကြိုတင်အသိပေးခြင်းမရှိဘဲတိုးတက်အောင်လုပ်ပါစေ။ ထို့အပြင်ထိုတိုးတက်မှုသည်ကျွန်ုပ်တို့၏တိုင်းပြည်ရှိကုမ္ပဏီကြီးများအကြားစျေးနှုန်းများမြင့်တက်လာခြင်းမဟုတ်ပါ။ Simyo သည်ထပ်မံပြုလုပ်ခဲ့ပြီးမိုဘိုင်းဒေတာနှုန်းထားရှိသည့်စာချုပ်များအားလုံးကိုတိုးတက်စေသည်.
ယခုမှစ။ လူတိုင်း သငျသညျစားသုံးရပ်တန့်သောကန်ထရိုက် megabytes လမှာသူတို့မဆုံးရှုံးကြပါ။ သင်သည်အခြားငွေတောင်းခံသည့်ကာလများအတွင်း၎င်းတို့ကိုစုဆောင်း။ စားသုံးနိုင်သည်။ ဒါကြောင့် သုံးလအထိရမယ် ငါတို့ပေးဆပ်နေသောမီဂါဘိုက်စုစုပေါင်းကိုအနှေးနှင့်အမြန်စားသုံးရန်ဖြစ်သည်။ ယခု အချိန်မှစ၍ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့မသုံးစွဲသော megabytes များအားလုံးကိုလာမည့်ငွေပေးချေခြင်းသံသရာအတွက်စုဆောင်းလိမ့်မည်။
Simyo မှာမင်းရဲ့ megabytes ကိုဆန့်ထားတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏မိုဘိုင်းဒေတာအတွက်ဤစားသုံးမှုအမျိုးအစားကိုပထမဆုံးကုမ္ပဏီကမ်းလှမ်းခြင်းမဟုတ်ပါ။ ဟုတ်တယ်၊ ငါတို့နိုင်ငံမှာသူတို့ကိုသုံးလလုံးလုံးလောင်ကျွမ်းစေနိုင်တာကပထမဆုံးဖြစ်တယ်။ အထူးသဖြင့်အဓိကအကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူနောက်ဆုံးစားသုံးသူဖြစ်သည့်အခါကုမ္ပဏီသည်၎င်းကိုတိုးတက်စေရန်အခြားတစ်ခုမှအကြံဥာဏ်ကောင်းတစ်ခုယူသောအခါ၎င်းကိုတန်ဖိုးထားသည်။
ဒီပဏာမခြေလှမ်းယှဉ်ပြိုင်မှုအတွက်ဥပမာတစ်ခုအဖြစ်အစေခံလိမ့်မည်နည်း ငါတို့မကြောက်ကြဘူး။ သို့သော်စိတ်ကျေနပ်မှုရှိသောသုံးစွဲသူ ၉၀၀,၀၀၀ ရှိသောကုမ္ပဏီတစ်ခုတွင်အရေအတွက်ရှိသည်။ အချည်းနှီးမဟုတ် ပြီးခဲ့သည့်နှစ်က Simyo သည်ကမ္ဘာ့ပထမဆုံးမိုဘိုင်း Virtual Operators ကွန်ဂရက်တွင်ကမ္ဘာပေါ်တွင်တီထွင်ဆန်းသစ်မှုအရှိဆုံးအော်ပရေတာအဖြစ်အသိအမှတ်ပြုခံခဲ့ရသည်.
အကယ်၍ သင်သည်ဤအော်ပရေတာ၏အသုံးပြုသူဖြစ်ပြီးအင်တာနက်သည်သင့်အတွက်အလုပ်မလုပ်ပါကဤနေရာတွင်မည်သို့ပြင်ဆင်ရမည်ကိုကျွန်ုပ်တို့ပြောပြပါသည် Simyo APN လက်ဖြင့်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » NOTICIAS » တယ်လီဖုန်းအော်ပရေတာ » Simyo သည်မစဉ်းစားထားသော megabytes များကိုစုဆောင်းရန်ခွင့်ပြုလိမ့်မည်
Google Chrome သည် page loading ကို ၃၅% အထိအရှိန်မြှင့်တင်လိမ့်မည်